▷ The best ultrabooks of 2022. Kedu nke ịzụrụ?
Ọ bụrụ na ị ruru ọkwa a, ọ ga-abụ na ị na-agbaso laptọọpụ ọgbara ọhụrụ na nke dị ọkụ ma dịkwa ike na nke ahụ adịghị oke ọnụ, ya mere, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ntuziaka na ihe niile ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ Ultrabook.
1 Ntụnyere akwụkwọ ultrabook kacha mma
2 ultrabooks kacha mma maka ego
2.5 Microsoft Ntugharị Microsoft
2.6 MacBook Ikuku
2.7 asus zen akwụkwọ
3 Gịnị bụ ultrabook
4 Ụdị ultrabook kacha mma
5 Kedu ihe dị iche n'etiti akwụkwọ ndetu na ultrabook
5.1 akwụkwọ ịde
6 Otu esi ahọrọ ezigbo Ultrabook
6.1 Ibu ibu
6.9 Ihe nrụpụta na emecha
7 Kedu onye kwesịrị ịzụta Ultrabook?
8 Ịkwesịrị imelite laptọọpụ gị?
9 Mkpebi na ultrabooks dị ọnụ ala
Ntụnyere akwụkwọ ultrabook kacha mma
Buru nke a n'uche, ka anyị leba anya na ultrabooks kacha mma ọnụ ala si ahịa. Na tebụl ntụnyere na-esote, ị ga-ahụ ụfọdụ akwụkwọ ultrabook akwadoro maka uru ha bara maka ego, ibugharị, ibu na arụmọrụ.
Laptọọpụ Ultrabook ...
ultrabooks kacha mma maka ego
Taa ị nwere ike nweta akwụkwọ ultrabooks dị ọnụ ala kacha ọhụrụ maka ihe na-erughị € 1.000, ị pụrụ ọbụna ịhụ ụfọdụ n'okpuru 500 euro ọ bụrụ na ị na-etinye oge na-achọ na atụnyere azụmahịa online.
Ee n'ezie. N'agbanyeghị na ha na-categorized dị ka ultrabooks atụla anya ihe dị oke mma. Nke kacha dị gịrịgịrị nwere njirimara ndị bara uru n'ezie ga-adị karịa 1.000 euro ma ọ bụ n'ụdị ọnụahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ọkọlọtọ ọgbara ọhụrụ dị ọnụ ala, ị ga-achụ àjà dị arọ, ihe eji eme ihe maka ikpe ahụ na àgwà ihuenyo. Ka o sina dị, enwere nhọrọ dị ukwuu na ahịa dị ka ndị anyị na-akwado n'okpuru. Ha na-atụ ntakịrị, ọnụahịa ha adịghị oke oke ma ha dị gịrịgịrị, nke bụ naanị njirimara ndị utlrabooks kwesịrị inwe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ otu nhazi nhazi nke ọma, nnukwu ihe ngosi, ndị nhazi nke oge a I5 isi o I7 isi, opekata mpe 8 GB nke RAM, ezigbo eserese na nchekwa SSD, ndị a bụ ultrabooks ị ga-atụle.
Lenovo Yoga 920 bụ otu n'ime laptọọpụ ọkọlọtọ kachasị mma taa Ị nwere ike nweta ya na-ahapụghị ego gị niile. Ihe owuwu ya na-eguzogide nke ukwuu n'ihi mkpuchi aluminom ya, ọ na-enyekwa arụmọrụ dị mma ma dị mfe ịkwalite ma ọ bụrụ na ịzụrụ ihe nlereanya bụ isi ma chọọ ịgbakwunye RAM ọzọ ma ọ bụ dochie nchekwa ahụ mgbe e mesịrị.
Ee, laptọọpụ dị oke ibu ma dị arọ, mana nke a, nke nwere ihe dị ka kilogram 1,4, dị n'okpuru nkezi, na-adịkwa mfe.. Na mgbakwunye, ihuenyo mmetụ ya na-enye mgbanwe dị mkpa gbasara ihe nlereanya nke afọ gara aga ma ugbu a bụ UHD nwere pikselụ 13840 × 2160 nke mkpebi, inch 14 ma kwadebere ya na panel IPS:. Banyere batrị ya, anyị nwere ike ịnweta awa 8 nke ojiji kwa ụgwọ, na-enwe ike ịgbatịkwu karịa ma ọ bụrụ na anyị wedata nchapụta ihuenyo ma ọ bụ na-eji obere ọrụ siri ike.
Anyị nwere ohere iji nyochaa isi ihe nlereanya na Core i7 processor na anyị nwere ike ime ka obi sie gị ike na arụmọrụ ya dị mma maka ihe ọ na-efu. A na-ere ihe nlereanya a maka ihe dị ka euro 800 ọ bụ ezie na e nwere nsụgharị ndị dị ike ma ọ bụ karịa, dabere na ihe ị chọrọ.
Lenovo Yoga 920 bụ nzọụkwụ gafere akara ahụ n'ihe gbasara ịdịmma na imewe. Ọ mara mma, ọla edo nwere agba ma nwee casing rọba a na-asachapụ, yana ahụigodo azụ. Anyị etinyela ya na listi netbook a kemgbe ekele maka ihuenyo ya, anyị nwere ike ịtụgharị ya ka ọ bụrụ mbadamba ihe n'ụzọ dị mfe, ịbụ ezigbo. 2 n'ime 1 laptọọpụ.
Ugbu a, Acer Swift 5 bụ otu n'ime kọmputa Laptọọpụpụ inch iri na anọ kacha ere nke ụwa Ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị ọnụ na udi ya. Ọ dịghịkwa ihe dị njọ na ya, ọ dịghịkwa ihe nwere ike iziga gị n'ụzọ ọzọ.
Swift 5 enweghị draịva anya, batrị nha dị mma, ahụigodo mara mma na trackpad. na nhọrọ dị mma nke ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ. Ejiri plastik mee ihe ahụ, mana udidi ya dị mma ma dị mfe ijikwa ya. Na mgbakwunye, ọ bụ laptọọpụ dị mfe, na-atụ ihe dịka 1,3 kg.
Ọ bụrụ na ị kpebie na ya, ị ga-enwe ihuenyo mmetụ, ezigbo ndị na-ekwu okwu (nke bụ ihe ọjọọ nke ultrabooks niile, ọ bụghị ihe dịpụrụ adịpụ na ihe nlereanya a), dị ka echiche nke ndị ọrụ ya si dị. Bụlagodi, Nke a Acer ọ bụ kọmpụta kacha mma Amazon nwere maka ọrịre ugbu a, yabụ ọ bụrụ na ọ dabara mkpa gị, ị kwesịrị ịnwale ya. A maara Amazon maka nkwado ndị ahịa ha na-enweghị ntụpọ ma ọ bụrụ na ha mehiere na mkpebi ha, n'ihi ya, anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị banyere nke ahụ.
Ọ nwere ihuenyo 1920 x 1080 px IPS, ndị na-ekwu okwu na obere ọkụ na nke dị gịrịgịrị.. Ọzọkwa, n'agbanyeghị mgbanwe ndị a niile, isi nhazi na-anọgide n'agbanyeghị na ọnụahịa na-ebili ma na-agụnye ọgbọ ọhụrụ Intel Core i5 processor, 8GB nke RAM na 512GB SSD ike.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na-enye karịa laptọọpụ ọ bụla ọzọ na ọnụ ahịa ya. Ọ bụ ezie na, dị ka ị hụlarị, ọ bụ ọnụ ahịa iji mee ka ụfọdụ mbelata na uru ya mana nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka laptọọpụ dị gịrịgịrị na obere dị ka nke a.
HP anyaụfụ 13-ba1002ns -...
Kọmputa hp akwụkwọ ndetu A maara ụdị inch 13 maka ọnụ ahịa asọmpi ha nke ukwuu. Anyị ga-akwado ụdị usoro Envy nke pụtara maka mbugharị ha, nke bụ naanị ihe anyị na-achọ mgbe anyị chọrọ ịzụta ultrabook.
Ha nwere ihe mkpuchi rọba siri ike, otu ahụ keyboard backlit, yana ihe ngosi HD zuru oke yiri ya na panel IPS.. Mana, ebe ihe nlereanya mbụ nwere afọ ojuju na ụfọdụ eserese nke Nvidia MX450 nwere 2GB nke RAM raara onwe ya nye, enwere ụdị ndị ọzọ dị na GPU ka mma, ezigbo maka ndị chọrọ ike eserese ọzọ.
N'ezie, HP Envy 13 abụghị naanị laptọọpụ nwere ọgbọ ọhụrụ nke Intel processors na kaadị eserese Nvidia, mana ọ bụ naanị ya na-ere maka oke ọnụahịa a ma na-anya isi ụdị aghụghọ a. Na mgbakwunye, nhazi a gụnyekwara 16GB nke RAM na draịvụ ike 512GB SSD..
A tụlere ya dị ka ihe ọzọ a ga-atụle mgbe uru kacha mma maka laptọọpụ ego.
Ị gaghị ahụ laptọọpụ 15,6-inch yiri ya ugbu a, dị ka Nke a bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe n'ụdị Yoga nke na-ere ihe dị ka euro 600. Ọnụahịa a ga-abụ nhazi kachasị mkpa, nke gụnyere Core i5 processor, 8 GB nke RAM, 256 GB SSD nke nchekwa na ihuenyo mmetụ nwere mkpebi nke 1920 × 1080 px. Ụdị elu dị elu dị ntakịrị ọnụ, ma ị nwere ike itinye ihuenyo FHD ka mma, i7 processor, RAM ọzọ na ọbụna kaadị eserese ka mma.
N'ezie, ihe kacha sie ike bụ na ọ bụ abụọ n'ime otu, agbanyeghị na laptọọpụ a karịrị nke ahụ. Ọ nwere mkpuchi igwe, keyboard na trackpad dị mma, batrị 48 Wh, yana nhọrọ siri ike nke ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ. Ihe ndị a niile na-eme Yoga 730 bụrụ otu n'ime ihe ntụgharị inch iri na ise kacha mma n'ahịa.
Microsoft Ntugharị Microsoft
La Ibu Microsoft 7 bụ ihe ọzọ na-agbanwe agbanwe nwere ngwaike ọgbara ọhụrụ, ọkachasị ọ bụ nke ị ga-eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị nwere oke mmefu ego. Ụdị ntinye ọkwa, nke nwere Core i5 processor, 8GB nke RAM, na 128GB SSD, na-ere ahịa maka ihe dịka $ 900.. Ụdị kachasị ọnụ, yana Core i7, na-efu ihe dị ka euro 800 karịa.
N'okwu a, n'ihi ọdịiche ọnụahịa, anyị na-akwado ụdị E5 nke anyị kwuru n'elu.
Na mgbakwunye na ọnụahịa ya, Microsoft Surface 7 nwere ntakịrị ihe ọzọ na-agbago elu aka ya: ahụigodo dị mma nke ukwuu, ndụ batrị dị oke mma yana ịdị mfe imelite ya site na nkwado Microsoft.
Ị ga-anụ ụtọ nke ukwuu na ihuenyo 12,3-inch na 2736 × 1824 pikselụ, ihe mkpuchi aluminom nke nwere ọtụtụ ihe na-egbuke egbuke n'ihu, ịdị arọ dị obere (0,79 Kg), n'agbanyeghị na ọ nwere ike ikpo ọkụ ngwa ngwa mgbe ị na-ebufe.
MacBook Air bụ ultrabook nke anụ ọhịa iri na atọ kacha mma nke Apple. Ọ nwere ahụ aluminom kọmpat karịa na ọkụ ọkụ (13 n'arọ), mkpuchi aluminom, ahụigodo azụ ọkụ na ihuenyo 1,25 × 2560 pixel IPS. Ụdị 1600-inch nwekwara a Batrị 34 ruo 58 Wh, nke na-atụgharị n'ime oke ihe dịka awa 8-10 kwa chajị.
Ọnụahịa akwadoro maka nhazi kachasị ọhụrụ sitere na 1000 euro, mana enwere ike ịchọta ụdị nwere Apple M1, 8GB nke RAM na 512GB nke draịvụ ike SSD maka ntakịrị ihe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo Ultrabook mana ị nweghị puku kwuru puku euro imefu, anyị na-akwado Asus ZenBook . Ọ na-ere ihe dị ka euro 750 (dabere na ihe nlereanya), ọ dị ọkụ, dị gịrịgịrị ma nwee nnukwu ndụ batrị. Ahụigodo ya dị mma, òké ya ziri ezi na ntụkwasị obi.
Asus ZenBook bụ otu n'ime Ultrabook ole na ole nke ọnụahịa a nwere ihuenyo 13,3-inch 1080p na-ebi otu ohere dị ka kọmpụta 13-inch ọdịnala, ihe enwetara ekele maka mbelata okpokolo agba .. Ọzọkwa, o nwere 16. GB nke RAM na 512 GB nke ebe nchekwa na draịvụ ike SSD gị. Ihe nhazi ya bụ ọgbọ ọhụrụ Intel Core i7. Ihe ngosi Acer Swift ọhụrụ, asọmpi ya kacha mma, nwere ndụ batrị na-erughị awa abụọ yana ịdị mma dị obere.
N'ime ule batrị anyị, Asus ZenBook dịruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 8 ozugbo. Ọ dịghị nke ọzọ Windows Ultrabooks anyị nwalere n'ime afọ abụọ gara aga enweta ụdị ndụ batrị. Ọtụtụ, n'ezie, rere site 6 awa ọrụ.
Trackpad ziri ezi ma na-anabata ya, anyị ahụghịkwa mmegharị ahụ́ na-ezighị ezi ma ọ bụ nke akọwahiere. Asus na-enye gị ohere ịhazi ma ọ bụ gbanyụọ mmegharị ahụ site na ngwugwu ngwanrọ.
Ihe mkpuchi igwe nke Asus ZenBook siri ike, adịghị atụgharị ma ọ bụ creak n'okpuru nrụgide. Ibu nke mkpuchi ya na-eme ka ihuenyo emeghe ma ọ bụ mechie karịa nke mbụ ịchọrọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ naghị enwekarị nsogbu, ihuenyo ahụ anaghịkwa ada ụda. N'oge ule anyị na Asus ZenBook, ọ dịghị mgbe ọ na-ekpo oke ọkụ, ndị na-akwado ya adịghịkwa oke ụda ma ọ bụ na-akpasu iwe. Maka ọnụahịa dị otú ahụ, ụdị ndị dị na ahịrị Asus ZenBook bụ laptọọpụ arụrụ nke ọma nke ukwuu..
Laptọọpụ nwere Ọgbọ na-esote 802.11ac Wi-fi, ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 atọ, otu ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, otu oghere maka ekweisi na otu maka kaadị SD. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na akwụkwọ ikike nwere oke otu afọ sitere na Asus.
N'ikpeazụ, a ghaghị imesi ya ike na ọ bụ 13-inch Ultrabook siri ike, nke nwere uru doro anya: ọnụahịa ya. A na-ewu ya nke ọma na nke siri ike ma nwee ọmarịcha ngosi - nwere otu obere ntụpọ. Ọrụ ya dị ka a tụrụ anya na ngwaọrụ Kwadoro site na Intel Core i5 processor (E nwekwara ụdị dị iche iche na Intel Core i7), ọ na-anọkwa ọtụtụ awa karịa nkezi ekele maka nnukwu batrị ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma maka onye ọ bụla. Ọ bụ ngwaahịa nwere àgwà dị mma yana obere ọghọm, dị mma maka onye zụrụ ya na obere ego.
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ịma ma laptọọpụ gị bụ ultrabook ma ọ bụ na ị chọghị ezigbo uru maka ego, lee anya Akụkọ a.
Gịnị bụ ultrabook
ultrabook bụ laptọọpụ nke ga-emezu ihe abụọ a chọrọ: be ìhè na nnọọ mma. Na mbụ ọ bụ Intel malitere iji okwu ahụ, ọbụnakwa debanyere aha ya, ma ụdị ndị ọzọ na mgbasa ozi pụrụ iche malitere iji ya na-ezo aka na kọmputa ndị dị ọkụ karịa laptọọpụ nkịtị na-enyeghị arụmọrụ dị ala, ma ọ bụ ọ bụghị.
Na mbụ, ultrabook ga-enwe a kacha ọkpụrụkpụ nke 21mm, jiri ihe nrụpụta voltaji dị ala, nwee casing metal, diski SSD na nnwere onwe dị ukwuu. Ha kwesịkwara inwe ihuenyo mmetụ, mana o yikarịrị ka anyị ga-ahụ ọtụtụ ngwaọrụ ndị echere dị ka akwụkwọ ultrabook ma tinye ihuenyo nkịtị (anaghị emetụ aka).
Na nkenke, ultrabook bụ laptọọpụ dị gịrịgịrị ma dị mfe nke na-enye atụmatụ ndị yiri ya na laptọọpụ nkịtị. Ma ebe ọ bụ na nkà na ụzụ, obere dị ọnụ karịa, ọnụ ahịa ya dị elu.
Ụdị ultrabook kacha mma
SAMSUNG Galaxy Book Pro -…
Samsung bụ otu n'ime ụdị ngwa eletrọnịkị kachasị n'ụwa. Ọ bụghị naanị na ọ na-emepụta smart ngwaọrụ dị ka smartphones ma ọ bụ smartwatches, ma ọ na-arụpụtakwa ngwa ụlọ, batrị, na ụdị niile nke dị n'ime akụrụngwa, dị ka hard drives, processors, na RAM na-echeta.
Na-ekpuchi nke ukwuu, ọ gaghị adị ọzọ ma na-arụpụta ma na-erekwa laptọọpụ. Na katalọgụ ya anyị nwere ultrabooks dị ka Usoro 9, ụfọdụ laptọọpụ ndị a na-eji ihe kachasị mma na ihe ndị dị n'ime ya dị elu na ngwá ọrụ ọkụ n'ezie.
19.5V 2.31A 45W ihe nkwụnye ọkụ ...
HP bụ akara ama ama na ụwa nke kọmpụta, n'agbanyeghị na akụkụ nke ama ya bụ n'ihi ndị na-ebi akwụkwọ ya. A na-akpọbu Hewlett-Packard, yana ihe karịrị afọ 80 n'azụ ya, HP aghọwokwa ewu ewu maka ịmepụta na ire kọmputa ụdị ọ bụla, nke katalọgụ ya gụnyere ultrabooks n'ime afọ iri gara aga.
Na ụfọdụ usoro ya, dị ka ekworoAnyị ga-ahụ laptọọpụ nwere ihuenyo ruo 14 ″ nwere ihe ndị nwere ọgụgụ isi na ihe ndị dị elu karị, yabụ ọ bara uru iburu ha n'uche mgbe anyị tụlere ịzụrụ kọmpụta dị fechaa, ma anyị chọrọ ka ọ dị ike ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe dị mfe.
Batrị BLESYS A41-K56...
Asus bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche na-arụpụta ma na-ere ngwa elektrọnik, robotics na ngwa ngwa, n'ime nke anyị nwere ụdị akụrụngwa dị n'ime na kọmpụta niile.
N'ime laptọọpụ ha, e nwekwara ụfọdụ ndị anyị nwere ike ịkpọ ultrabooks, dị ka nke usoro VivoBook n'ime nke anyị na-ahụ laptọọpụ ndị nwere ezigbo ihe yana ihe ndị nwere ọkara dị elu n'ogo ruru 14 ". Ọ bụ nhọrọ ị ga-atụle mgbe ị na-atụle ịzụrụ ultrabook.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ China pụrụ iche, karịa ihe niile, na ngwaọrụ eletrọnịkị smart (ekwentị mkpanaka, elekere, mbadamba ...) na kọmputa. Dị ka ụlọ ọrụ si mba Eshia, ọ na-arụpụta ma na-ere ngwaọrụ ndị na-adịghị ọnụ, ma nke ahụ apụtaghị na ha niile bụ isi.
Na ya ThinkPad na Akwụkwọ echiche, karịsịa na nke abụọ, anyị ga-ahụ kọmputa ndị na-eguzogide ọgwụ, ọkụ na ndị na-arụ ọrụ dị elu, n'ihi ya, ọ bara uru iburu ha n'uche mgbe anyị chọrọ ịzụta kọmputa dị mfe ibufe na ọnụ ala dị ala.
Xiaomi bụ akara China nke nwetara ụfọdụ mkpa n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ikekwe n'ihi ihe abụọ: nke mbụ, ịnye ngwaọrụ dị mma; nke abụọ, ịmepụta, aha na ịkwalite akụkọ gị n'ụzọ yiri nke a ma ama nke akara ngosi ya bụ nke mkpụrụ osisi.
N'ime laptọọpụ ha, anyị nwere ụfọdụ utrabooks dị ka nke Ikuku Laptọọpụ m 13.3 ″, nwere ihe ndị dị n'ime ime dị elu n'otu egwuregwu dị ọkụ ma jiri ihe kacha mma wuo ya. Obi abụọ adịghị ya, uru ha bara maka ego bụ otu n'ime ihe mere ị ga-eji buru ha n'uche mgbe ị na-atụle ịzụrụ ọ bụghị naanị nke laptọọpụ, ma ọ bụla smart ngwaọrụ.
Ihe nkwụnye chaja ọhụrụ...
Acer bụ otu n'ime ụdị kachasị amasị sava maka laptọọpụ. N'ozuzu, kọmputa ha bụ ndị a haziri nke ọma na arụkwa ya nke ọma, bụ nke a na-enwe ekele nke ọma site na kiiboodu ha na-agbanye na laptọọpụ ha.
Na mgbakwunye, na katalọgụ ya anyị nwere ike ịhụ kọmpụta dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nwere ezigbo uru maka ego. N'usoro ya Swift Ha na-enye kọmpụta dị mfe, dị ka Swift 5 nke tụrụ 990g na ihuenyo inch 14.
Ụlọ ọrụ Cupertino a ma ama, n'etiti ihe ndị ọzọ, maka ịbụ otu n'ime ndị mbụ na-ere kọmputa nkeonwe - ndị anyị na-eji n'ụlọ ma ọ bụghị n'ebe ọrụ. Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ịkọ akụkọ na-eji otu n'ime kọmpụta ha arụ ọrụ ha, otu akụkụ n'ihi na sistemụ arụmọrụ na-ewu ewu na akụkụ ụfọdụ n'ihi na ọ na-emepụta kọmpụta dị fechaa.
Offọdụ n'ime ya MacBook Ha na-eru ihe na-erughị 1kg, nke na-eme ka ha daba na ụdị nke ultrabooks ma dị mma maka ndị chọrọ iji kọmputa na-ebu mgbe niile.
Msi bụ ụlọ ọrụ na-echepụta, na-emepụta ma na-ere ngwaike kọmputa, gụnyere laptọọpụ, desktọpụpụ, nne nne, kaadị eserese, kọmputa niile n'ime otu (AIO), sava, na mpụta. N'ime katalọgụ ya, ọ na-enyekwa laptops dị fechaa mara dị ka ultrabooks, dị ka usoro Modern n'ime nke anyị ga-ahụ akụrụngwa nwere ihe ndị dị elu na-emepe emepe nke ejiri ihe kacha mma wuo na ihuenyo ruo 14 ".
Ha bụ nhọrọ ị ga-eburu n'uche ọ bụghị naanị mgbe anyị na-achọ kọmputa dị arọ, kamakwa mgbe anyị na-achọ ihe dị ike karị dị ka kọmputa maka egwuregwu.
Dell bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta, na-ere ma na-akwado sava, netwọk netwọk, software, mpụta na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara nkà na ụzụ. Ma ọ bụrụ na e ji ihe mara ha, ọ bụ maka kọmputa ha.
N'akụkụ ya latituudu Anyị nwere ike ịchọta ultrabooks nwere ihuenyo 13-14 ″ ejiri ihe kacha mma na imewe mee ya, yabụ na ha kwesịrị ịbụ nhọrọ iji tụlee mgbe ihe anyị na-achọ bụ kọmpụta dị fechaa na nke na-agbanwe agbanwe.
Kedu ihe dị iche n'etiti akwụkwọ ndetu na ultrabook
N'agbanyeghị na ha niile yiri otu, enwere ọdịiche pụtara ìhè n'etiti kọmpụta a na-akpọ akwụkwọ ndetu na ultrabooks na ị kwesịrị ịma ka ị mara nke kacha mma maka mkpa gị:
Ugbu a ọ na-ezo aka na laptọọpụ nkịtị. N’ezie, ebe ọ bụ na akwụkwọ ndetu bịara dị gịrịgịrị ma na-ebuwanye ibu, a na-akpọ ha akwụkwọ ndetu.
Ọ nwere ike ijikọ usoro jụrụ oyi na ngwaike dị ike karịa
Ha na-abụkarị modular, nke na-eme ka nrụzi ma ọ bụ gbasaa ụfọdụ akụkụ ya.
Ha dị ọnụ ala karịa.
Ha na-etinyekarị ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ akụkụ, ebe ọ bụ na enwere ohere iji dobe ha.
Ọ dị arọ na ibu.
Ndụ batrị pere mpe.
Chepụta ihe siri ike karị.
Ọ bụ laptọọpụ nwere profaịlụ dị gịrịgịrị nke na-erughị 1.5 cm, mgbe ụfọdụ ọ nwere ike iru milimita ole na ole. Na mgbakwunye, ha na-adịkarị mfe, n'okpuru 1 kg n'ịdị arọ. Ọdịiche ọzọ gbasara akwụkwọ ndetu bụ na ọ na-eji ngwaike na-arụ ọrụ nke ọma karị, iji belata oriri na ịgbatị nnwere onwe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, e mere ya ka ọ na-ebuli njem.
Dị nnọọ mfe na fechaa. Ya mere, a kediegwu agagharị.
Site na nnukwu nnwere onwe, ekele maka ịrụ ọrụ ya dị ukwuu.
Ihuenyo ha na-enwekarị akụkụ dị nta, n'etiti 13 na 14 ", n'agbanyeghị na enwekwara nnukwu nha.
Ọ na-enwekarị ọtụtụ ihe welded, na-eme ka mgbasawanye sie ike ma ọ bụ agaghị ekwe omume.
Ha na-enwekwa ike inwe ọnụ ahịa dịtụ elu.
Akụrụngwa na-achọkarị ịrụ ọrụ nke ọma na-adịchaghị mma karịa ụdịdị ndị siri ike arụnyere n'ime akwụkwọ ndetu buru ibu.
Otu esi ahọrọ ezigbo Ultrabook
Opekempe nkọwapụta maka nnukwu Ultrabook bụ 11-ọgbọ Intel processor, 8GB nke RAM, 512GB nke SSD ike mbanye, na awa isii nke ndụ batrị kwa ụgwọ. Ọzọkwa, ihuenyo gị kwesịrị ịdị sentimita 12 ruo 14, yana mkpebi nke 1920 x 1080 ma ọ bụ karịa. N'ikpeazụ, mgbe ihuenyo mmetụ dị mma ịnweta, ọ bụghị ihe dị mkpa.
Ultrabook kwesịrị ịdị gịrịgịrị ma dịkwa ọkụ, dịka o kwere mee, n'ihi na emebere ngwaọrụ ndị a ka ọ bụrụ obere obere. N'agbanyeghị nke ahụ, laptọọpụ arụpụtara nke ọma, nke dị ntakịrị karịa na-abụkarị nhọrọ kacha mma karịa Ultrabook nke dị gịrịgịrị, nke na-adịghị mma.
Ezigbo ahụigodo na trackpad dị oke mkpa, ndị na-ekwu okwu kwesịrị ịdị mma. Ọzọkwa, ha ekwesịghị ịdị ọkụ nke ukwuu ma ọ bụ mkpọtụ.
Ịhọrọ ezigbo ultrabook adịghị iche karịa ịhọrọ laptọọpụ na-abụghị, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ mezuo ihe achọrọ ka ọ bụrụ otu, anyị ga-achọ ihe na-emezu ihe ndị a:
Akwụkwọ ultrabook kwesịrị ịbụ kọmpụta dị fechaa. Kọmputa 10.1 ″ agaghị aba uru ma ọ bụrụ na emere ya maka mgbu ma tụọ 2kg. Ọ dịghị arọ nke na nkọwa na-eme ka kọmputa bụrụ akụkụ nke ultrabooks, ma ọ dị mkpa ka ọ bụrụ laptọọpụ, ọ bụghịkwa kọmputa desktọọpụ ma ọ bụ AIO nwere ike ịbụ, ma na-ebelata ibu ya.
Akwụkwọ ultrabook kacha dị mfe nwere ihe na-erughị 1kg, ịdị arọ nke etinyere ihe ndị na-emepe emepe nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ nke ọma n'ebe ọ bụla. Ezigbo ultrabook nwekwara ike ịtụ ihe dịka 1.5kg.
Akwụkwọ ultrabook ga-abụrịrị kọmpụta dị fechaa, anyị amaralarị nke ahụ, mana ọ ga-abụrịrị a obere akwụkwọ ndetu. Ọkpụrụkpụ kacha nke ultrabook kwesịrị ịbụ 21mm mechiri na laptọọpụ 14 ″, 18mm nke ọ bụla dị gịrịgịrị ma dị obere.
Ogo ihuenyo na-agbanwe agbanwe mana, n'agbanyeghị na enweghị nkọwapụta nha ka ọ bụrụ ultrabook, ha na-abụkarị n'etiti 12 na 14 sentimita. N'ịtụle na ibu dị mkpa, o yighị ka a Laptọọpụ nwere ihuenyo 15.6"Ọ nwere ike ịghọ ultrabook ma na-erughị 12 ọ na-ewereworị dị ka Obere.
Ka laptọọpụ dabara na ngalaba ultrabook, ihe nrụpụta ya ga-emezurịrị otu ihe achọrọ: ọ ga-abụrịrị a ultra-ala voltaji processor. Ihe kpatara ya bụ na ọ ga-enye opekempe nke nnwere onwe yana, ọ bụrụ na ọ gụnyere ihe nhazi nkịtị, obere batrị ha gụnyere ga-egbochi anyị iji laptọọpụ ndị a ruo ọtụtụ awa.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ ndị nhazi nke na-enye arụmọrụ ọkara, dị ka ndị Intel i5 ma ọ bụ elu ma ọ bụ AMD Ryzen 5 ma ọ bụ karịa.
Batrị nke ultrabook ga-enye ezigbo nnwere onwe, nke bụ a opekempe nke 5 awa ojiji na awa 9 na njikere. Iji mezuo nke a, ihe nrụpụta ultra-low voltaji dị mkpa. Enwere ụfọdụ ultrabooks nwere ike inye ihe dị ka awa iri.
RAM bụ akụkụ ọzọ nke na-akọwaghị ma laptọọpụ ọ bụ ultrabook ma ọ bụ na ọ bụghị, mana ọ ga-abụkwa na ekwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ekpebi otu kọmputa ma ọ bụ ọzọ. Ugbu a yana sistemụ arụmọrụ dị adị, agaghị m akwado ịzụrụ ihe ọ bụla na-erughị 8GB nke RAM kama ịhọrọ ụfọdụ. 16GB nke ahụ ga-eme ka anyị na-arụ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị ọrụ anyị na-agbalị ịrụ.
Akwụkwọ ultrabook dị mma ga-enwerịrị nchekwa dị mma n'ime ya, ọkachasị diski na-enye ọsọ ọgụgụ / ide nke ọma. draịva ndị a bụ SSDs, ihe, ozugbo ịnwale ha, ị nweghị ike ịdị ndụ na-enweghị ha, ebe ọ bụ na ha na-emezi arụmọrụ / ọsọ. Ikike dabere na ojiji anyị, mana ọ bara uru ịzụta ihe nwere opekempe 256GB nke nchekwa.
Nhọrọ ọzọ bụ ịhọrọ nke nwere diski ngwakọ, nke nwere akụkụ SSD na akụkụ HDD, nke ga-enye anyị ohere iji uru nke arụmọrụ dị mma ma chekwaa ozi ndị ọzọ maka ọnụ ala dị ala.
Obi abụọ adịghị ya, họrọ a laptọọpụ na SSD Ọ bụ ihe dị mkpa dị ka njirisi anyị si dị.
Kaadị eserese nke ezigbo ultrabook kwesịrị ịdị na-eso ndị otu ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme nzọ dị mma, anyị ga-atụle ịzụrụ laptọọpụ nwere kaadị eserese Nvidia, ọ bụ ezie na AMD Radeon dịkwa mma nke ukwuu.
Ihe nrụpụta na emecha
Akwụkwọ ultrabook bụ kọmpụta abịakọrọ ma ọ bụ “squashed”. Ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ndị dị elu, nke nwere ike ime ka ha dị ọkụ mgbe anyị na-arụ ọrụ siri ike. Iji zere nke a, a ga-arụpụtarịrị akwụkwọ ndetu ndị dị fechaa ihe dara igwe iji meziwanye ikpo ọkụ.
N'aka nke ọzọ, ha nwekwara nhazi dị mma, ihe na-adịghị eju anyị anya mgbe anyị na-atụle na anyị na-ekwu maka kọmputa ndị dị gịrịgịrị.
Kedu onye kwesịrị ịzụta Ultrabook?
Ultrabooks ka mma maka ndị chọrọ nnukwu laptọọpụ obere, na-arụ ọrụ nke ọma, yana ndụ batrị. O kwesịrị ịdị ogologo oge iji mee ka ha rụọ ọrụ awa ha chọrọ.
Ya mere, ezigbo Ultrabook nwere ike nhazi zuru oke na ndụ batrị iji mee ka ị rụchaa ọrụ dị mkpa na ụgbọ elu ọ bụla gaa na kọntinent ọzọ. N'otu aka ahụ, Ultrabook kwesịrị ịdị ọkụ nke ọma ka a na-ebu ya ngwa ngwa na njem.
Buru n'uche na Ultrabooks na-eri karịa otu laptọọpụ nkịtị: ọnụ ahịa dị n'etiti 700 na 1.500 euro. Ebe ị na-enwetakarị uru kacha mma maka ego bụ n'etiti euro 1.100 na 1.200..
Ihe ị kwesịrị ime ka o doo anya bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụrụ ultrabook kacha mma, ya bu, nke kacha mma, na njirimara ka mma na ọkụ ọkụ na-ebu, ị ga-emefu ego ahụ n'ihi na ọ ga-efu nnukwu ego.
Ọ dabara nke ọma, enwere ụdị ngwaahịa dị iche iche n'ahịa ugbu a. ultrabooks dị ọnụ ala dị ka ndị anyị nyere gị ebe a nke e ji mara nke ọma n'ụzọ ziri ezi n'ihe gbasara uru ha nwere na ọnụ ahịa ha na-eri.
Na nkenke, ụdị kọmputa ndị a zuru oke laptọọpụ iji mụọ o na-arụ ọrụ ogologo awa.
Ịkwesịrị imelite laptọọpụ gị?
Ezigbo laptọọpụ kwesịrị ịdịru gị ihe dị ka afọ abụọ; kacha mma anọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na afọ ojuju gị na laptọọpụ gị ugbu a, ịkwesighi imelite ya. Ma, ọ bụrụ na kọmputa gị na-abịa na njedebe - ngwa na-ewe oge iji buo ya, kọmputa na-ewe oge iji bido, batrị na-adịru ihe karịrị awa ole na ole mgbe ị chachara - ị chọrọ ngwaọrụ ọhụrụ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike imeziwanye oge nchaji na oge nkwalite. Ọmụmaatụ, imelite draịvụ ike maka SSD kwesịrị ime. Ma eleghị anya, ị nwere ike tinyekwuo RAM. Ma, ọ bụrụ na nke a abụghị nhọrọ, na usoro adịghị enyere aka, ọ bụ oge ịzụta laptọọpụ ọhụrụ.
Ndị na-arụ ọrụ Intel kachasị ọhụrụ nwere arụmọrụ dị mma na ndụ batrị karịa ọgbọ gara aga.
Ị nwere ike nweta ụfọdụ ndụ batrị, mana ọ baghị uru ego ị ga-eri nke laptọọpụ ọhụrụ. Ma ọ bụ ị gaghị achọpụta nnukwu ọdịiche dị n'etiti arụmọrụ nke otu na nke ọzọ.
Mkpebi na ultrabooks dị ọnụ ala
Ihe mbụ ị kwesịrị ịjụ ultrabook dị ọnụ ala bụ ma ọ bara ego gị ma ọ bụ na ọ baghị uru. N'uche anyị, azịza ya bụ ee, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịchọta ọtụtụ akụrụngwa dị mma site na erughị euro 1000 (na ole na ole dị mma maka obere ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịchụ ibu na ụfọdụ atụmatụ).
N'ikpeazụ, ọ dịịrị gị ịhọrọ ụdị nke kacha mma maka mkpa gị, mmasị na mmefu ego gị. Ọtụtụ n'ime nkeji ndị anyị nyochara na post a na-arụ ọrụ nke ọma maka ịnya ịntanetị, ikiri ihe nkiri, ige egwu na ịrụ ụfọdụ ọrụ.. Ndị ọzọ zuru oke maka ịmụ akwụkwọ, dị ka laptọọpụ mbụ maka ụmụ gị ma ọ bụ dị ka laptọọpụ nkwado dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya. gaa njem. N'ikpeazụ, di na nwunye n'ime ha nwere ike zuru oke ọbụna maka egwuregwu ma ọ bụ dịka laptọọpụ azụmahịa.
Nke a bụ naanị ihe anyị ga-agwa gị gbasara ya ugbu a. Anyị na-emelite ndepụta ultrabooks dị ọnụ ala mgbe niile, na-agbakwunye ụdị ọhụrụ ka ha na-adị, yabụ na-elele anya mgbe niile maka ozi ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịhapụ anyị okwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ihe na isiokwu anyị, nwee ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mkpa enyemaka mgbe ị na-ekpebi nke ị ga-azụta, anyị ga-anọ ebe a ịza gị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Akwụkwọ Ultrabook dị ọnụ ala
4 kwuru na "Ultrabooks dị ọnụ ala"
Ọktoba 2017-06 na elekere 13:10 nke ụtụtụ
Ana m achọ ngwa ụlọ. Isi ihe eji eme ya ga-abụ ịntanetị, akpaaka ụlọ ọrụ (ụmụ m amalitela ụlọ akwụkwọ sekọndrị) na ụlọ ahịa / ebe nchekwa / ebe / bugharịa faịlụ mgbasa ozi na-agbasasị gburugburu ụlọ na draịvụ ike, dvds, draịva flash, laptọọpụ ochie xp ... Enwere m mmasị, karịa ihe niile, na-eme nke ikpeazụ na-enweghị ịnwụ na mgbalị ahụ. Ego izizi: € 600-700. Ma achọrọ m kọmpụta nwere Windows 10 etinyeburu ya. Ọ ga-amasị m niile na Otu, ọ bụrụ na ọ bụ desktọpụ, ma ọ bụ ultrabook, ma ọ bụrụ na ọ bụ ibugharị.
Kedu maka Sonia. Enwere m olileanya na izu ụka ga-aga nke ọma. See hụrụ, ka ọ bata n'uche yana njirimara ị na-agwa m, a ga m akwado Acer Aspire E5-573G-520S (ebe a ị nwere ezigbo onyinye), na ụlọ ahịa ndị ọzọ, a na-eji 700 euro emefu, ma ị ga-ahụ na ị nwere ike imelite ya n'efu ka Windows 10. Ịdị ọnụ ahịa echere m na ọ bụ ihe kacha mma ugbu a, na dịka ị ga-ahụ, ị ​​nwere 1TB. nke ebe nchekwa, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa inwe ọtụtụ faịlụ gbasasịa 😉 Enwere m olileanya na m nwere ike inyere gị aka, ekele!
Ọktoba 2017-06 na elekere 12:3 nke abalị
N'ehihie, Juan! Anọ m na-achọ pc nke dị ihe dị ka euro 600 wee hụ Lennovo yoga 14 Isk (euro 599). Kedu ihe ị chere banyere ya? Ana m achọ ihe dị ike na ọkụ maka ọnụahịa ahụ! Daalụ na ekele!
Ndewo Gabriel, n'eziokwu, enwere nhọrọ ka mma nke otu akara Lenovo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe kama ọkụ na ụfọdụ ike, ana m akwado nke ọ bụla n'ime ntụnyere anyị. 2 n'ime 1 laptọọpụ nke ahụ ga-ejere gị ozi n'ụdị ọnụ ahịa 🙂